အချစ်​မူးတဲ့ ည -၂( ၀တ္ထုတို အဖွဲ့ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အချစ်​မူးတဲ့ ည -၂( ၀တ္ထုတို အဖွဲ့ )
အချစ်​မူးတဲ့ ည -၂( ၀တ္ထုတို အဖွဲ့ )
Posted by naywoon ni on Sep 20, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 12 comments
​နေ၀န်းနီ - ၀တ္ထု တိုအဖွဲ့
ကို​မောင်​​မောင်​​လေးက ​ကောင်​မ​လေးရဲ့ အိတ်​ကိုဆွဲပြီး အိမ်​ထဲကို ဦး​ဆောင်​၀င်​လာခဲ့တယ်​ ။ ​ကောင်​မ​လေးက​တော့ ချမ်းလို့လားမသိဘူး ။ ​နောက်​က​နေ ကုပ်​ကုပ်​​လေးပါလာတယ်​ ။ ​ရေစို​နေတဲ့ သူ့အ၀တ်​အစား​ကြောင့်​ အိမ်​ထဲကို မ၀န့်​မရဲ လိုက်​၀င်​လာတယ်​ ။ ဧည့်​ခန်းမှာ ဖွင့်​ထားတဲ့ တီဗွီ စကရင်​ကို ကြည့်​မိပြီး မ၀န့်​မရဲ မျက်​လွှာချသွားတယ်​ ။ ကို​မောင်​​မောင်​​လေးက​တော့ ခပ်​တည်​တည်​ပဲ ။ ခုထိလည်း ​ကောင်​မ​လေးကို ဂရုတစ်​စိုက်​မကြည့်​မိ​သေးပါဘူး ။ ​ကောင်​မ​လေးရဲ့ အိတ်​ကို ဧည့်​ခန်း​ထောင့်​ချပြီး တီဗွီ ကို ပိတ်​လိုက်​တယ်​ ။ ​ကောင်​မ​လေးကို မကြည့်​ပဲ အ၀တ်​လဲချင်​ရင်​ အဲ့အခန်းထဲ သွားလဲလိုက်​ ။ အဲ့သလိုပဲ ​ပြောလိုက်​ပြီး ​စော​စောက ထိုင်​​နေခဲ့တဲ့ ခုံမှာ ထိုင်​လိုက်​ပြီး ​စော​စောက ကျန်​တဲ့ ​သောက်​လက်​စ အရက်​ခွက်​ကို တစ်​ဘရိတ်​ထဲ ​မော့ချလိုက်​တယ်​ ။ ခုမှ သူသတိရတာက သူလည်း အ၀တ်​လဲဖို့ လို​အောင်​ စိုရွဲ​နေတယ်​ဆိုတာကိုပါ ။ ​ကောင်​မ​လေးက အခန်းထဲက ခုထိပြန်​ထွက်​မလာ​သေးဘူး ။ ဒါနဲ့ အရက်​ ပုလင်းထဲက အရက်​ ထပ်​ငှဲ့လိုက်​ပြီး ​ရေ​ရောလိုက်​တယ်​ ။ ​အရက်​ကို သူ့ချည့်​ မ​သောက်​နိုင်​​တော့တာ ငါးနှစ်​​လောက်​ရှိပါပြီ​ကော ။ အရင်​က​တော့ ဘယ်​ရမလဲ ။ အရက်​​သောက်​ရင်​ ​ရေဆိုတာ လိုက်ိုမလို​တာ ။ အမြည်း ဖတ်​က်ို ယူစားပြီး ​သောက်​လက်​စ ​ဆေး​ပေါ့လိပ်​ကို မီးညှိလိုက်​ပြ်ီး ခပ်​ပြင်းပြင်း ဖွာရှိုက်​လိုက်​တယ်​ ။ ပြီး​တော့မှ ​ကောင်​မ​လေး ထွက်​လာပြီလာ အခန်းဖက်​လှည့်​ အကြည့်​မှာ အခန်းထဲက ထွက်​လာတဲ့ ​ကောင်​မ​လေးနဲ့ တည့်​တည့်​ဆုံတယ်​ ။ အဲ့ဒိ​တော့မှ ​ကောင်​မ​လေးကို ​သေ​သေချာချာကြည့်​မိတယ်​ ။ ခု​ခေတ်​စား​နေတဲ့ မယ်​​တွေ ဘာ​တွေ အ​ရွေးခံ နိုင်​​အောင်​ကို လန်းတယ်​ ။ ဒါ ​သေချာတယ်​ ။ ကို​မောင်​​မောင်​​လေး အသက်​ ​လေးဆယ်​ ​ကျော်​​နေပြီ ဆို​ပေမဲ့ လက်​ရှိ ပစ္စက္ခ အ​ခြေအ​နေ​တွေ မျက်​​ခြေပြတ်​တာမှ မဟုတ်​တာ ။ အခန်းထဲမှာ​တောင်​ ဒက်​စ်​​တော့ ကွန်​ပြူတာတစ်​လုံးနဲ့ အင်​တာနက်​ချိတ်​ထားသူပဲ ။ ဒါ အသာထားပါဦး ။ ​ကောင်​မ​လေးကို
” နင်​ ဒီမှာထိုင်​ဦး ငါ အ၀တ်​လဲ လိုက်​ဦးမယ်​ ။”
ပြီး​တော့မှ အရက်​ခွက်​ကိုဆွဲပြီး အရက်​တစ်​ငုံ စာ​မော့လိုက်​ပြီး ​ဆေး​ပေါ့လိပ်​ဖွာ ရက်​နဲ့ အခန်းဘက်​​လျှောက်​သွားတယ်​ ။ အိမ်​က ကျယ်​ပါတယ်​ ။ အခန်းက နှစ်​ခန်းပဲ ရှိတာ ။ တစ်​ခန်းက ပိတ်​ထားတယ်​​လေ ။ ဒီ​တော့ ကို​မောင်​​မောင်​​လေးက သူအိပ်​တဲ့ အခန်းကိုပဲ ​ကောင်​မ​လေးကို အ၀တ်​လဲ ခိုင်းခဲ့တာ ။ ​ကောင်​မ​လေး ၀င်​သွားတုန်းက ပါသွားတဲ့ သူမ အ၀တ်​အိတ်​ ပြန်​ထွက်​လာ​တော့ပါမလာ​တော့ဘူး ။ အခန်းထဲမှာပဲ ထားခဲ့ပုံရတယ်​ ။ အိပ်​ခန်းက သူတစ်​​ယောက်​ထဲ အိပ်​တဲ့ အခန်း ဆို​တော့ အခန်းထဲ ပွကြီးလန်​​နေတာ ။ ဒီ​ကောင်​မ​လေး သူမ အ၀တ်​စို​တွေ ဘယ်​လို​ဖြေရှင်းခဲ့လဲ မသိဘူးလို့​တွေးရင်း အိပ်​ခန်းဘက်​​လျှောက်​လာခဲ့တယ်​ ။ အခန်းဝ ​ရောက်​​တော့ ရနံ့ တစ်​မျိုး သင်းပြန့်​လာတာနဲ့ နှုတ်​ဆက်​လိုက်​ရတယ်​ ။ ဘာနံ့ ဆိုတာကို​တော့ ​သေ​သေချာချာမခွဲ ခြားတတ်​​ပေမဲ့ သိပ်​ပြီး ခပ်​ရိုင်းရိုင်း အနံ့အသက်​မဟုတ်​တာမို့ အခန်းတွင်းဝင်​လာပြီး အ၀တ်​တန်းရှိရာကို လက်​လှမ်းလိုက်​တယ်​ ။ ကို​မောင်​​မောင်​​လေး အကျင့်​က အ၀တ်​​တွေကို တန်း​ပေါ်မှာပဲထား ပြီး တစ်​ထည်​ပြီး တစ်​ထည်​ ​လျှော်​ဖွတ်​ပြီးဝတ်​​လေ့ရှိတာပါပဲ ။ ​သေတ္တာ​တွေ ဘီရို​တွေ ရှိ​ပေမဲ့ မသုံးဘူး ။ ရှိသမျှ အင်္ကျီ ချိတ်​ထိုးထားပြီး လုံခြည်​ ကိုလည်း ဒီအတိုင်း တန်း​ပေါ် လွှားထားတတ်​တယ်​ ။ ဆို​တော့ကာ အ၀တ်​တန်း​ပေါ်မှာ ………
ရှင်း​နေပါ့လား​ပေါ့ ။ ရှိသမျှလုံခြည်​ အားလုံး တစ်​ထည်​ချင်း​ခေါက်​ပြီး ​တန်း​ပေါ်​ခေါက်​လျှက်​တင်​ထားတာ​တွေ့လိုက်​တယ်​ ။ ကြိုးတန်း တစ်​ဖက်​တစ်​ချက်​စီမှာ အင်္ကျီ က တစ်​ဖက်​ လုံခြည်​က တစ်​ဖက်​ ။ အလယ်​မှာ​တော့ ​ကျေးဇူးရှင်​မ​လေးရဲ့ ​ရေစို​နေတဲ့ အ၀တ်​များ ​တွေ့လိုက်​ရတယ်​ ။ ဒင်း ဒါ​ကြောင့်​ လိုအပ်​တာထက်​ကြာ​နေတာကိုး ။ ​တွေ့ရာ အင်္ကျီ လုံခြည်​ ​ကောက်​လဲ ပြီးအပြင်​ပြနာထွက်​လာခဲ့တယ်​ ။ အခန်းထဲက မထွက်​ခင်​ ကုတင်​ရှိရာ လှမ်းကြည့်​လိုက်​​တော့ ကုတင်​ ခါးလယ်​​လောက်​မှာ သူမရဲ့ အိတ်​ကို​တွေ့လိုက်​ရလို့ ​ခေါင်းနဘမ်းကြ်ီးသွားတယ်​ ။ ​သောက်​ထားတဲ့ အရက်​ က ပိုမူးသွားသလိုပဲ ။ ခုမှ နှစ်​ပက်​​ကျော်​​လေး ​သောက်​ရ​သေးတာ ။ ကို​မောင်​​မောင်​​လေးက အူ အရိုင်းမဟုတ်​ပါဘူး ။ အရက်​နဲ့ နှစ်​​ပေါင်းများစွာ ရင်းနှီးပြီးသားပါ ။ ဧည့်​ခန်းထဲ ပြန်​​ရောက်​​တော့ ​စော​စောက ကို​မောင်​​မောင်​​လေး ထိုင်​ခဲ့ တဲ့ နှစ်​​ယောက်​ထိုင်​ ဆက်​တီ ထိုင်​ခုံ​ပေါ်မှာ ​ကောင်​မ​လေးက ခပ်​ရွံ့ရွံ့ ထိုင်​လို ။ အ​အေးဒဏ်​ ခံ​နေရတုန်းနဲ့ တူရဲ့ ။ အံ မယ်​ ​သောက်​လက်​စ အရက်​ခွက်​က ဖင်​ကပ်​ပဲ ရှိ​တော့ပါလား ။ အပြင်းစား​လေးနဲ့ လာ​တွေ့​နေပြီနဲ့ တူရဲ့ ။
” ညီမ အရမ်း​အေး​နေလို့ အကို ကြီး​သောက်​ထားတား နဲနဲ​သောက်​လိုက်​တယ်​​နော်​ ။ ခုမှ ရင်​ထဲ ​နေသာထိုင်​သာရှိသွား​တော့တယ်​ ”
သူမက ဘာမှ မဖြစ်​သလ်ို ​ပြောတာကို ကို​မောင်​​မောင်​​လေးကလည်း ဂရုစိုက်​မ​နေပဲ ဆက်​တီထိုင်​ခုံမှာဝင်​ထိုင်​လိုက်​ပြီး စားပွဲ ​ပေါ်က ပုလင်းကို ဆွဲယူပြီး အရက်​ခွက်​ထဲ သွန်​ထည့်​လိုက်​​တော့တယ်​ ။ ပြီးမှ ​ရေအပြည့်​ထည့်​ပြီး တစ်​ငုံစာ​မော့​သောက်​လိုက်​ပြီး ပုလင်းခွံ ကိုဆွဲပြီး မီးဖို​ဆောင်​ဘက်​ထွက်​လာခဲ့တယ်​ ။ မီးဖိုထဲ ​ရောက်​​တော့ အရက်​ပုလင်း တစ်​ပြားနဲ့ အတူ ယမ်​ယမ်​ ​ခေါက်​ဆွဲ​ခြောက်​ထုတ်​ အချဉ်​ နှစ်​ထုတ်​နဲ့ ပန်းကန်​ပြား တစ်​ချပ်​ ဆွဲပြီး ပြန်​ထွက်​လာခဲ့တယ်​ ။ ​နောက်​မှ ​မေ့​နေတာနဲ့ ဖန်​ခွက်​တစ်​ခွက်​ပါ ဆွဲလာခဲ့တယ်​ ။ ဧည့်​ခန်းထဲ ပြန်​​ရောက်​​တော့ အရက်​ ပုလင်းဖွင့်​ပြီး ​ကောင်​မ​လေးကို တစ်​ခွက်​ငှဲ့ ​ပေးပြီး ​ရေပါ​ရော​ပေးလိုက်​တယ်​ ။ ယူလာတဲ့ ​ခေါက်​ဆွဲ ​ခြောက်​ထုတ်​ကို ​ခြေပြီး ပန်းကန်​ထဲ ထည့်​လိုက်​တယ်​ ။ ပါလာတဲ့ ဟင်းခတ်​မှုန့်​နဲ့ အချဉ်​ထုတ်​ကို ​ဖောက်​ပြီး ပန်းကန်​ထဲက ​ခေါက်​ဆွဲ ​ကျေ​တွေ​ပေါ်ကိုဖြူးလိုက်​တယ်​ ။ သူကိုယ်​တိုင်​ ​ခေါက်​ဆွဲ အလိပ်​ တစ်​တုံးကိုယူပြီး စားပြတယ်​ ။ ဖန်​ခွက်​ထဲက ကျန်​တဲ့ အရက်​ကို ကုန်​​အောင်​​မော့ပြီး သူ့ အတွက်​ ထပ်​ထည့်​တယ်​ ။ ခုထိ ‘အ၀တ်​သွားလဲ လိုက်​ ‘ ‘ ငါ အ၀တ်​သွားလဲ လိုက်​ဦးမယ်​ ‘ ဆိုတဲ့ စကား နှစ်​ခွန်းကလွဲပြီး ကို​မောင်​​မောင်​​လေး ဘာမှ မ​ပြောမိ​သေးသလို ​ကောင်​မ​လေးကလည်း စကား တစ်​ခွန်းပဲ ​ပြောဖူး ​သေးတယ်​​နော်​။ ​အေးလို့ လက်​ကျန်​အရက်​​တွေ ​သောက်​လိုက်​တယ်​ ဆိုလား ¿ ခုထိ သူတို့က်ို ကြည့်​​နေရ​တာ အသံမပါတဲ့ VDO ဖိုင်​ကြည့်​​နေရသလိုပဲ ။ နှစ်​​ယောက်​စလုံး တစ်​​ယောက်​ သ​ဘော တစ်​​ယောက်​နားလည်​​နေသလိုပဲ ။ (ဟုတ်​မဟုတ်​​တော့ သူတို့ ​ဗြောင်​ဖွင့်​​မေးကြည့်​မှသာသိ​တော့မယ်​ ။ ဟုတ်​တယ်​​နော်​ )
ကို​မောင်​​မောင်​​လေးက စားပွဲ​ပေါ်က ရှိတဲ့ အရက်​ခွက်​​တွေနဲ့ အမြည်း ခွက်​​တွေ​ပေါ် လက်​​ဝှေ့ယမ်းပြလိုက်​ပြီး ” ခု​လော​လောဆယ်​ ရှိ​နေတာ​တွေက​တော့ ဒါ​တွေပဲ ။ စားချင်​တာ စား ​သောက်​ချင်​သ​လောက်​​သောက်​ပြီး မင်း ဖြစ်​ခဲ့တာ​လေး ငါ့ကို ​ပြောပြစမ်းပါဦး ”
ကို​မောင်​​မောင်း​လေး က တ်ိတ်​ဆိတ်​​နေတဲ့ နှစ်​​ယောက်​ထဲရှိတဲ့ စားပွဲမှာ စတင်​​ဖောက်​ထွင်းစကားဆိုလိုက်​တယ်​ ။ ခပ်​ရွံ့ရွံ့​လေး ထိုင်​​နေရှာတဲ့ ​ကောင်​မ​လေး ဆတ်​ကနဲ တစ်​ချက်​​မော့ကြည့်​ပြီး မျက်​လွှာအရင်​ချလို့ ​ခေါင်းပါငုံ့သွားတယ်​ ။ ပြီးမှ ……
” ပြီးခဲ့တဲ့ အ​ကြောင်းအရာ​တွေထဲမှာ စိတ်​ချမ်းသာစရာ တစ်​ခုမှ မပါတာပဲ အကိုကြီးရယ်​ ။ ပြန်​​ပြော​နေလို့လဲ စိတ်​​မောစရာ​တွေရှိပဲ ။ ခုမှ အနည်​ထိုင်​ကာစ ညီမတို့စိတ်​​တွေကို ဒီအတိုင်း​လေးထားပြီး ​နေလိုက်​ကြရင်​မ​ကောင်းဘူးလား”
​ကောင်​မ​လေးက အဲ့ဒိလို ​ပြောပြီး လက်​နှစ်​ဖက်​ကို အ​ကြောင်းမဲ့ ပွတ်​​နေတယ်​ ။ ဘယ်​ဘက်​ကလက်​ညိုးကို ညာဖက်လက်​ဖဝါးနဲ့ ဆုတ်​နယ်​​နေတယ်​ ။
” ​အေး​လေ မင်းမ​ပြောချင်​တာကို ဇွတ်​မ​မေး​တော့ပါဘူး ။ ခု​တော့ စားစရာရှိတာစား ​သောက်​စရာရှိတာ​သောက်​ ။ ဒီည​တော့ ဒီအနီးတ၀ိုက်​မှာလဲ ဆိုင်​မရှိဘူး ။ မြို့ထဲထွက်​ဖို့ရာလဲ ရာသီဥတုက အ​ခြေအ​နေ မ​ကောင်းဘူး ။ ထမင်းစားချင်​ရင်​​တော့ မီးဖိုထဲမှာရှိတယ်​ ။ ​အေး ငါ ထပ်​​ပြောရဦးမယ်​ ။ မိန်းမနဲ့ ပတ်​သက်​ရင်​ အ​တွေ့ အကြုံ အတန်​အသင့်​​တော့ ရှိပါရဲ့ ။ ဒါ​ပေမဲ့ ငါက စကား​ပြောမ​ကောင်းဘူး ။ အဲ့ဒိအတွက်​ မင်း စိတ်​ထဲ အ​နှောက်​အယှက်​မဖြစ်​ပါနဲ့ ။ ဒီတစ်​ည မင်း သ​ဘောရှိ နားနိုင်​ပါရဲ့ ”
ကို​မောင်​​မောင်​​လေးက ရှည်​လျားစွာ​ပြောရင်း သူ့အတွက်​ငှဲ့ထားတဲ့ အရက်​ခွက်​ကို ဆွဲ ပြီး ​မော့ချလိုက်​တယ်​ ။
” ဖြစ်​ပါတယ်​ အကိုကြီးရယ်​ ။ ဒီ​လောက်​ဧည့်​ခံ​နေတာပဲ ညီမက ​ကျေးဇူးတင်​​နေတာပါ ”
ခုထိ ကို​မောင်​​မောင်​​လေး ​ကောင်​မ​လေးရဲ့ နာမယ်​ မ​မေးမိ​သေးဘူး ။ မထူးဆန်းဘူးလား ။ ​မေးဖို့​တော့ စိတ်​ကူးမိသားပဲ ။ သူ​မေးလို့​ကော ​ကောင်​မ​လေးက ​ဖြေရင်​​ကောင်းသား ။ ဒီတစ်​ညပဲ ဆုံရမဲ့သူ နာမယ်​​တွေ လိပ်​စာ​တွေ သိ​နေဖို့လဲ မလို​လောက်​ပါဘူး ။ ​နော့
သူ​တွေး​နေတုန်းမှာပဲ ​ကောင်​မ​လေးက သူ့ကိုတစ်​ချက်​လှမ်းကြည့်​ပြီး အရက်​ခွက်​ကို မ၀ံ့မရဲ ဆွဲယူပြီး တစ်​ငုံ​သောက်​လိုက်​တယ်​ ။ အရက်​နဲ့ အထာကျတဲ့ မိန်းက​လေး ဟုတ်​ဟန်​မတူပါဘူး ။ မျက်​နှာကိုရှုံ့မဲ့သွားတာ ။ ကမန်းကတန်း ​ရေခွက်​ကိုယူပြီး ​သောက်​တယ်​ ။ ပြီး​တော့ မတ်​တပ်​ရပ်​တယ်​ ။ မျက်​​တောင်​မခတ်​ အကဲခတ်​​နေတဲ့ ကို​မောင်​​မောင်​​လေး သ​ဘော​ပေါက်​လိုက်​ပြီ ။
” လာ ​နောက်​ထဲသွားချင်​ရင်​ ”
​ကောင်​မ​လေးကို လက်​ဆွဲရင်း ​ရေချိုးခန်းရှိရာ ဆွဲ​ခေါ်လာခဲ့တယ်​ ။ မျက်​နှာသစ်​ ​ဘေစင်​ ​ရှေ့​ရောက်​မှ လက်​လွှတ်​လိုက်​ပြီး
” အန်​ချင်​ရင်​ အန်​လိုက်​ ” လို့​ပြောတယ်​ ။ ​ကောင်​မ​လေးက ​ခေါင်းကိုယမ်းပြီး ​ရေအိမ်​ဘက်​လက်​ညိုးထိုးပြရင်​ ​ရေအိမ်​ထဲဝင်​သွားတယ်​ ။ ဒီ​တော့မှ သက်​ပြင်းချပြီး သူလည်း ဆီးသွားချင်​လာတယ်​ ။ ကို​မောင်​​မောင်​​လေး ခုမှစဉ်းစားကြည့်​မိတယ်​ ။ ​စော​စောကလည်း ​ကောင်​မ​လေးကို အ၀တ်​လဲဖို့ ​ပြောပြီးမှ သူလည်းတစ်​ကိုယ်​လုံး စ်ိုရွဲ​နေတာ သတိထားမိတယ်​ ။ ခုလည်း ​ကောင်​မ​လေး ​ရေအိမ်​ထဲဝင်​သွားမှ သူကိုယ်​တိုင်​ဆီးသွားဖို့သတိရပြန်​တယ်​ ။ သူ့ခံစားမှု​တွေ သူ့မူပိုင်​​ကော ဟုတ်​​သေးရဲ့လား ။ တစ်​စုံတစ်​ရာက သူ့ကို လွှမ်းမိုးတာခံ​နေရပြီလား ။ ရီ​ဝေစွာ ကြာရှည်​ မစဉ်းစားနိုင်​ပဲ ​ကောင်​မ​လေး ​ရေအိမ်​ထဲက ထွက်​လာတာနဲ့ သူလည်း ဒ​ရေ​သောပါး ​ရေအိမ်​ထဲဝင်​ခဲ့တယ်​ ။ ကိစ္စ ၀ိစ္စ ရှင်းပြီး ပြန်​ထွက်​လာ​တော့ ​ကောင်​မ​လေးက မျက်​နှာသစ်​ပြီး သူ့ကို​စောင့်​​နေတာ​တွေ့လိုက်​ရတယ်​ ။ သူ ​ကောင်​မ​လေး အနား ​ရောက်​သွား​တော့ ​ကောင်​မ​လေးက သူ့ရင်​ခွင်​ထဲ ခိုဝင်​လာတယ်​ ။ ကို​မောင်​​မောင်​​လေးက ဘာမှမ​တွေး​တော့ဘူး ။ ​ကောင်​မ​လေး ပုခုန်းကို အသာတွဲပြီး ဧည့်​ခန်းထဲ ပြန်​၀င်​လာခဲ့​တော့တယ်​ ။
ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရသလိုပဲ မျက်လုံးထဲမှာ ပေါ်လာတယ်
မှန်းထားတာတွေ အတိုင်း ဖြစ်တော့ မလား အဘနီ ရဲ့။
လှည့်ကွက်လေး ထည့်ပေးစမ်းပါ။ lol:-)))
စောဒီးအကြီးကြီး ပါ အဘနီ။
သများ က မြစပဲရိုး (ခ) မြစာကလေး (ခ) အရီးမုတ်ဆိတ် (ခ) အရီးခင် (ခ) အရီးခင်လတ် (ခ) ခင်လတ် (ခ) ကိုလတ်ကြီး
အဲဒီအရက်သောက်ပြီး.. မူးလို့.. မသိလိုက်လို့ပါတွေ..
.. မနက်အိပ်ယာထတော့မှ.. ဘာညာကွိကွတွေ..မလုပ်နဲ့ဗျာ..
အဲဒီ.. အရက်မသောက်ဖူး.. ယောက်ျားနဲ့မအိပ်ဖူးတဲ့.. စာရေးဆရာမပေါက်စတွေ.. စိတ်ကူးယဉ်ရေးတာတွေ..ရေးခဲ့တာတွေကို.. တော်လှန်စမ်းပါ..
အရက်သောက်ပြီး.. မူးရင်.. အဲဒီစိတ်တွေလျှော့နည်းကျဆင်းတာ. အရက်သမားတိုင်းအသိ..။
Let’s takealook at what happens to our bodies when we drink alcohol.
Alcohol isacentral nervous system depressant. Alcohol acts by inhibiting parts of the central nervous system important for sexual arousal and orgasm — respiration, circulation and sensitivity of nerve endings.
Alcohol can make getting an erection more difficult. Large amounts of alcohol (or long-term) consumption has been associated with problems getting erections. Dehydration with drinking causes less blood volume andarise in angiotensin, the hormone associated with erectile dysfunction. Alcohol’s inhibition of the central nervous system also contributes to the problem.
ကိုးရီးယားကားလို အပိုင်းတွေ သိပ်မဆွဲဆန့်ပါနဲ့တော့ ၊
မြန်မာကားလိုလည်း အဖျားမရှုးအောင်သိမ်းပေးပါ :mrgreenn:
အဖျားမရှူးဘူး ဗျို့ နုတ်​ပက်​ထဲမှာ ရိုက်​ထားတဲ့ စာ ​ကော်​ပီ ပြန်​ယူတာ ပျက်​ပျက်​ကုန်​လို့ ဒီတစ်​ခါ draft လုပ်​ပြီး သိမ်းမယ်​ဗျာ ။ ဒါထက်​ သူကြီး​ပြောသလို အရက်​အ​ပေါ်ကိုလည်းသစ္စာ မ​ဖောက်​ပါဘူးဗျ စိတ်​ချပါ ။ သုံးကြိ်မ်​​မြောက်​ လက်​ခ​မောင်း ခပ်​ခြင်း အဲ မဟုတ်​ပါဘူး သုံးကြိမ်​​မြောက်​​ရေးရမဲ့ အပိုင်းသုံးကို သူကြီးဆိုဒ်​ထဲမှာ ​ရေးပြီး draft လုပ်​ပါရ​စေ​တော့ ။ နုတ်​ပက်​မှာက ရှည်​လွန်းလို့လား ဘာလဲ မသ်ိ ​ကော်​ပီ လုပ်​မရ ။
မှတ်​ချက်​ ။ စာတင်​တဲ့ အချိန်​မူးမ​နေတာ​သေချာပါတယ်​ ။ တစ်​​ရေးနိုးထတင်​ဖို့ ကြိုးစားတာပါ ။